प्रहरीकै अगाडि चौकीभित्रै सासुद्वारा ज्वाइँको हत्याको प्रयास, ९ पटक हान्यो छुरा .. – Digital Newspaper
सामान्यतया हामी सुरक्षाको लागि प्रहरीलाई गुहार्छौं । तर, प्रहरीको सुरक्षा घेराभित्रै आक्रमण भयो भने सुरक्षा खोज्न कहाँ जानु । यस्तै भएको छ प्रेम विवाह गर्ने एक युवकलाई ।उनलाई आफ्नै सासुले प्रहरी चौकीभित्रै ९ पटक छुरा प्रहार गरी हत्याको प्रयास गरेकी छिन् ।
भारतको इन्दौरमा छोरीले भागेर प्रेमविवाह गरेपछि रिसाएकी उक सासुले आफ्ना ज्वाइँको हत्याको प्रयास गरेकी हुन् ।गम्भीर घाइते ती युवकलाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ । सासुलाई हिरासतमा लिइएको छ । उनीसँगबाट एक चक्कु र खुकुरी जफत गरिएको छ ।यहाँका सागर धारेले २ दिनअघि प्रेरणा महाजनसँग प्रेमविवाह गरेका थिए ।
प्रेरणाका परिवारले उनी हराएको रिपोर्ट दर्ता गराएका थिए । शुक्रबार साँझ सागर र प्रेरणा बिहे गरेर घर फर्के । उजुरीका आधारमा उनीहरुलाई प्रहरी चौकी बोलाएर बयान लिइँदै थियो ।उनीहरुको बिहे प्रेरणाका पिता र दाजुले स्वीकार गरिसकेका थिए । अचानक त्यहाँ प्रेरणाकी आमा आइपुगिन् ।
आमा सीमाले आफ्नो पेट दुखेको भन्दै एकैछिन कुसीमा बसिन् त्यसपछि शौचालय गइन् । शौचालयबाट फर्किँदा उनको हातमा एउटा चक्कु थियो । कसैले केही पत्तो पाउनुभन्दा पहिल्यै सीमाले सागरमाथि आक्रमण गरिन् । उनले सागरको पिठ्युँ, घाँटी, र टाउकोमा ९ पटक प्रहार गरिन् ।
यो घटना एकदमै अचानक भएकोले प्रहरी जवानहरु तत्काल घटना रोक्न सकेनन् ।प्रहारपछि घाइते भएका सागरलाई बचाउन प्रहरीलाई केही समय लाग्यो ।
घटनापछि रुँदै प्रेरणाले आफूले आफ्नो यच्छाअनुसार नै बिहे गरेको बताएकी छिन् । प्रहरीका अनुसार सीमा पहिले नै तयारीका साथ आएकी थिइन् ।खुकुरीमा सागरलाई मार्ने उद्देश्यले २ दिन अगाडि नै धार लगाइएको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
उनले सारीमा हतियार लुकाएर ल्याएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
साभार :डिसी नेपालबाट
← लद्दाखमा भारत–चीनबीच झडप यसरी ढाल्यो चीनले भारतिय सेना हेर्नुहोस यो live भिडियो ….
यसरि २१ जना राज्यमन्त्री थप्दै प्रधानमन्त्री देउवा !…… →
हेर्नुस कहिले पाउदै हुनुहुन्छ त तपाईंले नेसनल आइडी कार्ड, अब नागरीकता विस्थापित हुने
October 9, 2017 nepsnews Comments Off on हेर्नुस कहिले पाउदै हुनुहुन्छ त तपाईंले नेसनल आइडी कार्ड, अब नागरीकता विस्थापित हुने
ज्यानको बाजी थापेर , मेयर रेणु दाहाल उद्धारमा….
August 13, 2017 nepsnews Comments Off on ज्यानको बाजी थापेर , मेयर रेणु दाहाल उद्धारमा….
राष्ट्रपतिलाई गाडी किन्ने पैसा साझा पार्टीले दिने आम नागरिक १ रुपियाँ
July 21, 2017 nepsnews Comments Off on राष्ट्रपतिलाई गाडी किन्ने पैसा साझा पार्टीले दिने आम नागरिक १ रुपियाँ